निषेधाज्ञा हट्यो, चहलपहल बढ्यो ! - नेपालबहस
निषेधाज्ञा हट्यो, चहलपहल बढ्यो !
| ९:५८:१५ मा प्रकाशित
२५ भदौ, काठमाडौं । झण्डै एक महिनादेखि लगाइएको निषेधाज्ञा बिहीबारदेखि हटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार रातीदेखि निषेधाज्ञा अन्त्य भएको निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञा हटेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा चहलपहल बढेको छ । बिहानैदेखि उपत्यकामा फाट्टफुट्ट गाडी चलेका छन् । मानिसहरुको आवतजावत बढेको छ ।
बजार पसल पनि खुलेका छन् । विभिन्न सुपरमार्केट पनि खुल्न शुरु भएका छन् । निषेधाज्ञा हटेसँगै काठमाडौंका अधिकांश सडकमा निजी तथा सार्वजनिक गाडी चल्न थालेका छन् । सार्वजनिक यातायात, व्यापार, व्यवसाय गर्न खुला गरेसँगै निषेधाज्ञा हटेको महसुस हुन थालेको छ । यद्यपी निषेधाज्ञा सबै क्षेत्रमा भने हटिसकेको छैन् ।
आज एकाबिहानै झलमल्ल घाम लागेपछि महोत्तरीवासीलाई राहत भर्खरै
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक दुई महिनादेखि स्थगित ७ मिनेट पहिले